Fihenan-tsoavaly fantsom-barotra fihenan-tsofina ho an'ny fivorian'ny varahina
Fantsona fantsom-baravarankely avo matetika
Miaraka amin'ny fihenan-tsasatra avo lenta Induction Soldering Brass Tubessolder mankany amin'ny fivorian'ny palitao varahina misy rano amin'ny fandroana ny induction.
DW-HF-15KW Induction Heating Machine
Ny hafanana: 424 ° F (217 ° C)
Fotoana: 10 segondra mandra-mikoriana ny gony; 15 segondra ahafahan'ny alloy mivoaka manodidina ny fantsona.
• fivoriam-palitao anaty rano
• Ny allie solder maimaimpoana mitarika
• Fampandrenesana famafazana fampitaovana
Ny fantsom-bavony / fantsom-bavony dia nahomby tamin'ny fivorian'ny varahina induction heating. Ny sombin-javatra dia tokony hapetraka amin'ny toerana ka ny fantsona no manakaiky ny faran'ny coil Ny sendika amidy amin'ny rindrina manify amin'ny fivoriambe dia mahatratra ny mari-pana varotra ao anatin'ny 10 segondra. Ny fihenan'ny mpivarotra faharoa dia hahatratra ny mari-pana fametrahana ny salan'isa 10 segondra any aoriana (15 segondra total). Ny hafanana 5 segondra fanampiny dia ilaina mba hahafahan'ny mpivarotra mikoriana amin'ny faladia manodidina ny fantsona hanatsarana ny kalitao farany sy ny bika aman'endriny.
Sokajy Technologies Tags Fantsona varahina famatsiana HF, haingam-pandeha matetika, haingam-pandaminana mahavelona, induction soldering, fantsona varahina fametrahana, induction soldering machine, fantsona fametrahana fantsona, soldering, varahina varahina, fantsom-barahina varahina Post Fikarohana
Tariby fanaraha-maso Coixial tariby